Seranan-tsambo famerenana minimalist 4 ho an'ny iPhone | Avy amin'ny mac aho
Applelised | | Accessories
Androany dia mitondra safidy vaovao ho an'ny iPhone-nao izahay ary koa ho an'ny fitaovana Apple hafa. Izy ireo dia dock famandrihana fomba minimalista dimy izay ahafahanao mitazona ny bateria feno kanto.
1 M2 Stand ($ 24,49)
2 Toeram-piantsenana fametahana marobe sy fitaovana ($ 34,99)
4 iPhone sy Apple Watch Docking Station ($ 35)
M2 Stand ($ 24,49)
Fijoro tsotra sy famahanana fototra ho an'ny iPhone izay mandeha tsara miaraka amin'ny iMac anao sy amin'ny fitaovana Apple rehetra. Ny endriny dia manome zoro fijery ahazoana aina mba hahafahanao mampiasa ny iPhone tsy esorinao amin'ny dock. Ho fanampin'izany, mamela anao hametraka azy amin'ny toerana marindrano izy, tonga lafatra hanohizanao mijery ireo andianao Netflix tianao indrindra rehefa manoratra lahatsoratra toa izao ianao. Azo alaina amin'ny volafotsy, mainty, volondavenona mainty ary raozy volamena.
Toeram-piantsenana fametahana marobe sy fitaovana ($ 34,99)
Vita amin'ny volotsangana sy manaja ny tontolo iainana, ity dock ity dia ahafahanao mandamina tsara ny fitaovanao rehetra, afaka mametraka iPhone, iPad ary MacBook maromaro aza ianao. Ho fanampin'izany, mamela anao "manafina" tariby izy io ary manafaka anao amin'ny habakabaka.
Iray amin'ireo toby fiampangana iPhone roa ambin'ny folo lafo indrindra io, ary izany dia vokatry ny akora nanamboarana azy. Ity dobo Grovemade ity dia manana vy vy misy tampon-tànana maple sanded. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mametraka ny iPhone amin'ny tranga rehetra, na matevina toy inona aza izany.
iPhone sy Apple Watch Docking Station ($ 35)
Ity dock kely mijery minimalist ity dia mitaky toerana kely dia kely ary manan-kery ho an'ny iPhone sy ny Apple Watch. Ankoatr'izay dia mitandrina ny tontolo iainana izy satria vita amin'ny volotsangana avy amin'ny voly maharitra. Ary raha irinao, ny magazay Etsy dia hanoratra inisialy azy ho fanomezana tonga lafatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Seranan-tsambo famerenana minimalist 4 ho an'ny iPhone
Apple patente headphones izay mifamadika avy amin'ny tariby mankany amin'ny Wireless mora foana